PrimeCoin စျေး - အွန်လိုင်း XPM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PrimeCoin (XPM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PrimeCoin (XPM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PrimeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 270 565.00
volume_24h_usd: $1 470 640.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PrimeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PrimeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PrimeCoinXPM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0789PrimeCoinXPM သို့ ယူရိုEUR€0.0667PrimeCoinXPM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0601PrimeCoinXPM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0718PrimeCoinXPM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.703PrimeCoinXPM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.497PrimeCoinXPM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.74PrimeCoinXPM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.294PrimeCoinXPM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.104PrimeCoinXPM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.11PrimeCoinXPM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.74PrimeCoinXPM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.611PrimeCoinXPM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.424PrimeCoinXPM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5.91PrimeCoinXPM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.13.32PrimeCoinXPM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.108PrimeCoinXPM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.121PrimeCoinXPM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.45PrimeCoinXPM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.548PrimeCoinXPM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥8.4PrimeCoinXPM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩93.58PrimeCoinXPM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦30.46PrimeCoinXPM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5.77PrimeCoinXPM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.16
PrimeCoinXPM သို့ BitcoinBTC0.000007 PrimeCoinXPM သို့ EthereumETH0.000205 PrimeCoinXPM သို့ LitecoinLTC0.00145 PrimeCoinXPM သို့ DigitalCashDASH0.000869 PrimeCoinXPM သို့ MoneroXMR0.000886 PrimeCoinXPM သို့ NxtNXT6.15 PrimeCoinXPM သို့ Ethereum ClassicETC0.0116 PrimeCoinXPM သို့ DogecoinDOGE22.76 PrimeCoinXPM သို့ ZCashZEC0.000957 PrimeCoinXPM သို့ BitsharesBTS2.43 PrimeCoinXPM သို့ DigiByteDGB2.52 PrimeCoinXPM သို့ RippleXRP0.28 PrimeCoinXPM သို့ BitcoinDarkBTCD0.00272 PrimeCoinXPM သို့ PeerCoinPPC0.262 PrimeCoinXPM သို့ CraigsCoinCRAIG35.94 PrimeCoinXPM သို့ BitstakeXBS3.36 PrimeCoinXPM သို့ PayCoinXPY1.38 PrimeCoinXPM သို့ ProsperCoinPRC9.9 PrimeCoinXPM သို့ YbCoinYBC0.00004 PrimeCoinXPM သို့ DarkKushDANK25.31 PrimeCoinXPM သို့ GiveCoinGIVE170.84 PrimeCoinXPM သို့ KoboCoinKOBO17.97 PrimeCoinXPM သို့ DarkTokenDT0.0726 PrimeCoinXPM သို့ CETUS CoinCETI227.82
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 13:45:02 +0000.